I-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi-uKhenketho kwi-Indiya yeMpuma
Ukuza kwi-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi njengoKhenkethi- Umtsalane obambe ngesandla kwiNtla mpuma yeIndiya
Ukuba uza eIndiya kwiVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi (eVisa India) unokukhetha ukuza I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya, I-Visa yeshishini laseNdiya, I-Visa yezonyango yaseIndiya. Sigubungela apha ezinye iindawo ezingaqhelekanga kuMbindi Mpuma waseIndiya iindawo zabakhenkethi ezifana neTawang Monastery, iZiro Valley kunye neGorichen Peak.
Isicelo seVisa saseIndiya (eVisa India) iyafumaneka kwi-intanethi ngeenjongo zokundwendwela, ukhenketho, ishishini, ukudibana kosapho ukusukela ngo-2014 xa Urhulumente waseIndiya Ukulungiswa komgaqo-nkqubo wawo wokungena kwelinye ilizwe.
Sigubungela apha ukhethe iindawo onokuzonwabela eIndiya emva kokuba uyifumene ngempumelelo Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India).
Tawang Imonki iseArunachal Pradesh eIndiya, kufutshane ne-Tibetan kunye neBhutanese fringes. Yabekelwa inkulungwane yeshumi elinesixhenxe, iTawang libutho lezenkolo laseGeluk elinomanyano kunye neDrepung Monastery eLhasa. Ibizwa ngokuba yeyona monastery enkulu yaseIndiya nenombolo yesibini kwihlabathi liphela, i-Tawang Monastery ilawula i-gompas elishumi elinesixhenxe kwilizwe liphela.
UGalden Namgey Lhatse, oguqula 'izulu lasezulwini ngorhatya olunenkwenkwezi' ngesiNgesi uyichaza kakuhle le ndawo intle. Ukucwangciswa i-10,000 yeenyawo kwintaba kwintlambo yoMlambo i-Tawang, i-cloister yenziwa njenge-chateau ebhiyozelwayo enendawo enkulu yokuhlanganisana, indawo yokuhlala yabucala engama-65 kunye nezinye izakhiwo eziluncedo. Ngaphandle kobunjineli bayo obumangalisayo kunye nolwakhiwo lobugcisa kunye nemizobo engathandekiyo, eyona nto inomdla kule ndawo yimifanekiso eqingqiweyo ka-Buddha Shakyamuni. Uluntu lwenkolo lwenkulungwane yeshumi elinesixhenxe lwasungulwa nguMerak Lama Lodre Gyatso ngokomyalelo kaNgawang Lobsang Gyatso, owesihlanu uDalai Lama. Mhlawumbi eyona ndawo yokundwendwela xa usiya eMntla Mpuma yiTawang Monastery.
Iinyawo ezingama-10,000 ngaphezulu kwenqanaba lolwandle eArunachal Pradesh, iTawang Monastery inika umbono omangalisayo ngentili. Ikhaya kubabingeleli abangama-450, le yeyona ndawo intle yokutyelelwa kwindibano engaqhelekanga. Ungahlala ngokufanayo kwaye uhloniphe nje umbono onomtsalane kwiTawand River ebusuku.
IVisa yaseIndiya yaBakhenkethi-Isikhokelo saBatyeleli
Ifihliwe kwintaba eshinyeneyo yaseArunachal Pradesh, iZiro Valley yindawo yokuloba kwiNorth East India ehlawulisa wonke umntu ngokungenisa umlinganiso ogcwele amasimi erayisi, iidolophu ezinomdla kunye nokuhamba kumathambeka aluhlaza afihlwe phantsi komgangatho otyebileyo wendlela. Ngelixa ukuthula kwale dolophu incinci kuyenza ukuba ibe sisiporho somoya, ubuhle bayo obugqithisileyo ngokufanayo butsalela uninzi lwendalo kunye nabathathi mifanekiso abahamba ngokukhethekileyo apha bevela kwiindawo ezikude phesheya ukuze bathathe imimoya yabo esemgangathweni oqhelekileyo. Indawo ayiqhelekanga kubaphandi bamava; akukhathaleki nokuba umntu ulindele amava okuphefumla okuphefumla umoya, intlango ngaphandle kukonwabisa okanye uphando ngobomi obungenagama, uZiro akasayi kushiya nabani na edanile.
Ngelixa uKhusru ngaphandle kwamathandabuzo exubusha neKashmir kwaye mhlawumbi njengoko kufanelekile, umbono wezulu emhlabeni ngokungathandabuzekiyo unokubekwa amabala amaninzi e-Arunachal. Ubekwe phakathi kweentaba ezinyanzelekileyo kwaye ungqongwe ziinkuni ezimnyama eziluhlaza yindawo entle yeZiro Valley. Ingenye yeyona ntlambo imangalisayo kwisizwe, inamasimi erayisi kunye nolungelelwaniso lwemijelo needolophu ezincinci. Kwintsasa ye-crisp isibhakabhaka sibhakabhaka ngokungacacanga kwaye umoya ovuthuzayo wenza umculo othandekayo njengama-buoys akhe malunga nentlambo kuyo yonke imithi, okwenza ukuba ujikeleze ucule. (Ewe, ngaxeshanye akukho nto ingaphezulu kune-bollywood ehlonelwayo yesibini).
Ukuchitha indawo ziidolophu ezincinci kunye namaqela ahlukileyo ohlukileyo ka-Apatani ahlala kwimvumelwano nendalo, kakhulu njengentsalela yombuso, apho uninzi ngaphandle kwento yonke yokuphila kunye nezithethe zakudala. Idolophu yaseHapoli iqhayisa ngeebhanki ezimbini okanye ezintathu, iimarike ezincinci kunye nokuziphilisa. Kulapha kwintlambo yeZiro, eHapoli, indawo leyo ekubhekiselwe kuyo njenge-NEFA yaqaliswa njengendawo eyahlukileyo ye-Union Territory kunye negunya eligama linguArunachal Pradesh ngo-1972.
Iidolophu zaseApatani ezisasazeke kule ntlambo zixinene ngezindlu zomthi, nangona kunjalo uninzi lwophahla lwazo ngoku zinetini endaweni yokugquma, kwaye inani elikhulayo labantu bafudukele kwintlambo kwezi dolophu zimbini ziqhubekayo: iHapoli (ekwabizwa kanjalo. New Ziro) emazantsi kunye ne-littler Old Ziro emantla.
I-Flanking ne-China, le ndawo ephezulu inobude obuziimitha ezingama-22,498. Njengoko kubonisiwe kwisizwe saseMonpa, esi sicangca sijongwa njengenye yeengqekembe ezingcwele ezikhuselweyo kubo bonke ububi. Ngaphezulu yenye yeziseko ezifanelekileyo zokuhambahamba nokunyuka intaba kwisithili sonke.
Isibheno esingenakuphikiswa seArunachal Pradesh sitsala inani elikhulu labakhenkethi abazokuchaza unyaka nonyaka. Ngomfanekiso ongenasiphako, ubomi obungaziwayo obungafakwanga ndawo, amachibi amkelekileyo, iincopho ezinomtsalane, kunye neendlela ezihlaziyayo zeentaba, ngenene yindawo apho kukho iindawo ezivulekileyo zokuhamba. Ngayiphi na imeko, into etsala abantu abaninzi abanyanzelekileyo ukuza kule ndawo ayisiyiyo kuphela indawo yokuvula, kodwa ithuba lokujoyina ukuhamba kunye nelitye elihamba nentshukumo engumxube ongaqhelekanga wokufumana amalungiselelo e-India. Ngokwenyani, iAventure e-Tawang ecaleni kwangaphandle, ukuhamba ngenyawo kunye nokukhwela amatye kususela kwilixa elidlulileyo elixabisekileyo labaphuphayo. Ukuba uhendwa kwaye ulingo lokuhamba uye kwi-Gorichen Peak eTawang uyakucenga, kuya kufuneka uqale uhambo ngexesha elide lika-Epreli ukuya kuJuni okanye ngoSeptemba nango-Okthobha. Yiba nokuba kunjalo, kuya kufuneka ukhumbule ukuba ukuhamba nge-Gorichen ngokungafaniyo akufani nokulinganisa iGorichen. Kwimeko apho ulungele ukuhamba nje kunye nokubandakanyeka ekunyukeni kwamatye, yinto efanelekileyo yokuhamba ukuya eChokersam, inkampu yaseGorichen.
Ngaphezulu kweemitha ezingama-6800 le yeyona ndawo iphakame kakhulu eArunachal Pradesh kwaye icwangciswe kumda weChina kwiSithili saseTawang iindlela ezikwiikhilomitha ezili-164 ukusuka kwilokishi yaseTawang. Abahambi, uhambo oluya kwinkampu yesiseko saseChokersam lunokunika umbono wokungena kwiGorichen Peak. Inkcazo yesilumkiso-uhambo oluya kwi-Gorichen Peak yenzelwe abakhweli abalungiselelwe njengoko kuyinto enqabileyo nenqabileyo eyaziwa ngokuba ngumceli mngeni nakwezona ntaba zintle. Ngaphandle kohambo olulahlekisayo, yeyona nto intle kakhulu eTawang. Ngaphandle kwento yokuba uninzi lwabakhenkethi besiya eArunachal Pradesh banokujonga ngokufutshane phezulu ngexesha lokuhamba kwabo ukusuka eBomdila ukuya eTawang, kubahambi abalungiselele ukutyelela eArunachal Pradesh abonelanga ngaphandle kohambo olugqithisileyo kunye nokukhwela amatye endleleni incopho. Ngaphandle kwencopho enomtsalane kunye nezinto zayo zokusingqongileyo, unokufumana ithuba lokubona indlu yaseMonpa eneedolophu ezikule khosi. Kule ndlu, umphezulu weGorichen yindawo ebekelwe bucala ekhusela abantu bendawo kuyo yonke into enobuqhokolo kwaye ke, kubhekiswa ngasese ku-Sa-Nga Phu oko kuthetha ukuba uBukumkani bobuThixo.
I-Arunachal Pradesh lilizwe eligcwele ziimpompo zamanzi, apho eyona nto iphambili ngokungathandabuzekiyo zii-Nuranang Falls ezili-100 leemitha (ngenye indlela ebizwa ngokuba yiJang fall). Ikwindawo yengingqi yeTawang, imingxunya ziikhilomitha ezimbini ukusuka kwidolophu yaseJang. Olunye uhlangothi oluchukumisayo lokuphuma sisityalo sehydroelectric kufutshane nesiseko semingxunya, esidala amandla omhlaba ojikelezayo.
Ngaphandle koko ibizwa ngokuba yiJung Falls okanye iJang Falls okanye iBong Falls, iNuranang Falls yehla ukusuka kubude beemitha ezili-100. Iqala ukusuka kumantla eSela Pass eyaziwayo, i-furth Nuranang River isakhele i-cascades kwaye emva koko inyathele kuMlambo iTawang. Ifunyanwa kumgama ongangeekhilomitha ezi-2 ukusuka eJang kufutshane nesitalato esidibanisa iTawang neBomdila. Ngapha koko, sisizathu esikhuthazayo sokuba kutheni isaziwa ngokuba yiJang cascades. Kukho elinye ilivo elinxulumene negama lecascade. Umjelo waseNuranang kunye nokuwa kweNuranang kuthiywa ngegama lendodakazi encinci yaseMonpa egama linguNura owanceda u-Rifleman Jaswant Singh Rawat, owayelilungu le-Maha Vir Chakra ngexesha lomlo we-Sino-Indian War ka-1962 kodwa wabanjwa ngamagunya ase China. Ayisiyiyo kuphela into entle yokutsala iArunachal Pradesh, kodwa ukongeza isetyenziselwa ukwenza amandla okusetyenziselwa ubumelwane. Kukho isityalo esincinci se-hydel esikufutshane nesiseko esidala amandla. I-Tawang inezona zixhobo zilungileyo kwilizwe. Isityalo esikhulu se-hydel esime ngaphakathi kwidomeyini asinakuqondakala njengoko sivelisa amandla afunekayo kubantu abakufutshane. Thatha idrive uye kwindawo ephezulu yecascade okanye ungade uthathe isigqibo sokuhamba. Xa ufika kwelona nqanaba liphezulu, uya kungeniswa ukuze ujonge ubungangamsha beeNgxangxasi zeNuranang. Lungisa ikhamera yakho kwaye uthathe iifoto ezimangalisayo zesithili esityebileyo saseNuranang. Kukho iikhabhathi ezincinci kunye neeresityu apho unokuvavanya khona isidlo sakusasa kunye nesidlo sasemini.